July 14, 2019 - BaHuThuTaGabar
“ဒီနေရာ (၇)ခု မှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လက်လွှတ်မခံပါနဲ့..”
ဒီနေရာ (၇)ခု မှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လက်လွှတ်မခံပါနဲ့ မှဲ့ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အယူအဆ အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ မှဲ့တစ်ခုစီတိုင်းမှာ ဘဝနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ တစ်ခုစီရှိပါတယ်လို့ မှဲ့ပညာရှင်တွေက ဆိုကြပါတယ် ။ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နေရာအမျိုးမျိုးမှာ မှဲ့တွေရှိနိုင်ပြီး အခုဖော်ပြမယ့် နေရာတွေမှာရှိတဲ့မှဲ့တွေကတော့ […]
လူ့ဘဝကို အတွေးမလွန်ဘဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေပြီး -ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ခံစား ဖြတ်သန်းကြည့်ပါ
ရွာတစ်ရွာက ကလေးမလေးတစ်ယောက် ကျောင်းကို နေ့တိုင်းတစ်ယောက်တည်းပဲ -အဝေးကြီးသွားပြီး ​ကျောင်းသွားတက်ရတယ် !! တစ်နေ့ ညနေကျောင်းဆင်းချိန်မှာ -မိုးတွေရုတ်တရတ် အုံ့ဆိုင်းလာပြီး ၊လျှပ်စီးတွေလျပ်​လာတယ် !! အမေဖြစ်သူက သမီးကို အရမ်းစိတ်ပူသွားပြီး -ကျောင်းကပြန်လာမယ့် လမ်းအတိုင်း စက်ဘီးနဲ့ – အမြန်နင်းသွားရှာတာပေါ့ !! သူ့သမီးကို လမ်းခုလတ်မှာတွေ့တဲ့အခါ -အမေဖြစ်သူက […]
ဘုန်းကြီးဆီက …သင်္ကန်းပြန်ဝယ်ပြီးလှူတာ… ကုသိုလ်ရပါသလား ငရဲကြီးပါသလား
ဘုန်းကြီးဆီက …သင်္ကန်းပြန်ဝယ်ပြီးလှူတာ… ကုသိုလ်ရပါသလား ငရဲကြီးပါသလား မဂ င်္ လာပါဦးဇင်း။ တခုလောက်မေးချင်လို့ပါ။ သူများလှူ ပြီးသား ပစ္စည်းတခုကို ကိုယ်က ပြန်ဝယ်ပီး ပြန်လှူရင် ကုသိုလ်မရဖူးဆိုတာဟုတ်ပါသလား။ ဥပမာ ပြောရ ရင် ဘုန်းကြီးကျောင်းမှ သင်္ကန်းတွေပေါများနေလို့ တပည့်တော်မက အသစ်တခု မဝယ်တော့ပဲ […]
မိတ်ဆွေများတွက် နောင်တ မရစေဖုိ့ ခုပဲဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ
မိတ်ဆွေများတွက် နောင်တ မရစေဖုိ့ ခုပဲဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ ထူးဆန်းတယ်ဗျမိတ်ဆွေတို့..သိန်းတစ်ထောင်လောက်ကုန်ခံပြီး အိမ်ဆောက်တယ်ဒါကပုံမှန်ကိစ္စလေးပါပဲ မိတ်ဆွေတို့ သိန်းတစ်ရာလောက် ကုန်ခံပြီး ကားတွေဝယ်ကြတယ် ဒါလေးပဲ ပုံမှန်ကိစ္စလေးပါပဲ မိတ်ဆွေတို့ သိန်း 20 လောက်ကုန်ခံပြီး ဖုန်းဝယ်တာလဲ ပုံမှန်လေးပါပဲ မိတ်ဆွေတို့ သိန်းချီလောက်ကုန်ခံပြီး အဝတ်အစားတွေဝယ်ရင်လဲ ပုံမှန်ကိစ္စဖြစ်နေတုန်းပါ မိတ်ဆွေတို့ ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ထ […]